သင်္ဘောသား... ~ MSU Portal
4/09/2013 12:55:00 AM Navi Kyaw No comments
ဒီခေါင်းစဉ်လေး သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင် ကို သော်၎င်း ၊ လူတန်းစားတစ်ရပ်ကိုသော်၎င်း ၊ အတတ်ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းတစ် ရပ် ကိုသော် ၄င်း ကိုယ်စားပြုပေလိမ့်မည်...။
သင်္ဘောသား သည် "ထင်းစိုက် လျှင်တောင် မီးမလောင်" တဲ့ ..... ဆိုကြသူများ ၊ လေးလုံးရောဂါလို့ အများသိတဲ့ AIDS ရဲ့ ဖခင် ရယ်လို့ ဆိုကြသူများ ၊ ကမ်းကုန်လို့ရေထဲရောက်... ရောက်တဲ့နေရာ တစ်ကျီဆောက်
ကုန်းပေါ်နေလျှင်ဘာမျှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ဖြစ်နေသူ ဟု ပြောဆိုနေကြသူများ.... အများအပြား ရှိကြပါတယ်....။
ယနေ့ခေတ် သင်္ဘောသား များသည် ယခင် ခေတ် သင်္ဘောသား များ၏ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ နှင့် နာမည် ကျော်ကြားမှု တို့ ကို လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာရ သော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရှိနေသေးသည်...။­
သင်္ဘောသား...... ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသား.... သူတို့ တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် သိထားတာ လေးတွေ ကို ပြောပြချင် ပါသည်...။ သင်္ဘောသား တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ရန်..... မည်သည့်အဆင့်များကို ကျော်ဖြတ်ရ မည်နည်း...
ဟုတ်ကဲ့.... အလုံးစုံ နှိမ့်ချ တတ်တဲ့ စိတ်ထား ထားရှိနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်...။ အရေးကြီးဆုံးပါ....။ လူသစ် လေး များကို ပိုပြီးပြောလိုပါသည်.... သင်္ဘောပေါ်သို့ ရောက်၍ သင်္ဘောသား ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေရန် လွယ်လင့်တကူ ရနိုင်လိမ့်မည်ဟု မထင်စေလိုပါ....။ မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှ ရရှိလာသော CDC မဆို... နိုင်ငံ၏တရားဝင်သင်္ဘောသား လက်မှတ် ဖြစ်သော်လည်း.... လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ၏ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ ပေါ် မူတည် ၍
သာ Onboard သင်္ဘောသားဘ၀ကိုရောက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။ အခွင့်အရေး ရလျှင် ရသလို... မိမိ၏ အရည်အချင်း ကို သိရှိစေရန် မှန်ကန်သောနည်းလမ်း နှင့် ပြသနိုင်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်..။
အငယ်တန်း ဘ၀ တွင် အောက်သက်ကျေစေရန် အတွက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမည် ၊ ခိုင်းတာ မှန်သမျှ.. ကျိုးနွံစွာ လုပ် ရမည်...။ နားမလည်တာ မှန်သမျှ သင်ယူရမည်...။ တက်ကြွ ရမည်...။ အထက်လူကြီး နှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြား သင်္ဘောသား ညီအစ်ကိုများ၏ အခက်အခဲများကို တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးရမည်...။ အမိန့်နာခံတတ်မှုနှင့် ရိုးသား ကြိုးစား မှုများသည် နောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက် ၏ အရည် အချင်း များ ပင်...။ သင်္ဘောသားပညာရပ်
နှင့် အခြား ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ခု လေ့လာသင်ယူသင့်သည်...။ မိမိသင်္ဘော ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အနေအထား ... အသက်ကယ်လှေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ... ကုန်တင်ကုန်ချ ပစ္စည်းများ
မိမိတို့ တင်လေ့ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်း Cargo ၏ သဘာဝ နှင့် အန္တရာယ် ကို လေ့လာ တတ်သော အကျင့် လေးတစ်ခုတည်ဆောက်သင့်သည်...။ မိမိ သိထားသော အချက်များကို Note ရေးသော အကျင့် ကောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်သင့်သည်...။
ယနေ့ခေတ် သင်္ဘောသား များ ၏ အဓိကလိုအပ်ချက် မှာ.... Computer ကျွမ်းကျင်မှု ၊ English စာ /စကား ကောင်းမွန်မှု ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်မှု ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာ လိုမှု တို့ သည် အဓိကကျသည်ဟု မြင်မိပါသည်...။
နောက်ထပ် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တွင် ECDIS System သည် သင်္ဘောတိုင်းတွင်မသုံးမဖြစ် အသုံးပြုလာရတော့မည်... လက်ရှိတွင် အသုံးပြုနေသော သင်္ဘောပေါင်းများစွာ ရှိနေပေပြီ... သူသည် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး သာသာမျှသာဖြစ်သောကြောင့် ပျက်သည်...
ခဏခဏ ပျက်သည်... ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်သောကြောင့် ECDIS ပျက်သောအရေးပေါ်အ­ခြေအနေတွင် Recovery လုပ်ခြင်း နှင့် System Set up လုပ် ရခြင်းများ လည်း ရှိသည်...။ ထိုအခြေအနေသည် ECDIS only သုံးသော သင်္ဘောများအတွက်
အရမ်းအရေးကြီးသောအချိန်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အလျှင်အမြန် ပြုပြင်မှနိုင်သာ အဆင်ပြေလိမ့်မည်...။ ထိုအချိန်တွင် ကွန်ပျူတာ advanced user level တစ်ယောက် အနေနှင့် သာအလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ေ­ပမည်...။နီးစပ်ရာ ဥပမာ..တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်..။ အခြားလိုအပ်ချက်များလည်းရှိနိုင်ပါသည်..။
သင်္ဘောတစ်စီး ၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကပ္ပတိန်မှ အလုပ်သင်အရာရှိ ထိ သော် ၄င်း ၊ အင်ဂျင်နီယာမှူးမှ အစ အလုပ်သင်အင်ဂျင်နီယာအထိ သော်၎င်း တစ်ယောက်ချင်းစီ­၏ လုပ်အား၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် အရေးပါမှု များသည် လွန်စွာအရေးကြီးလှပေသည်။
ရိုးရိုးသင်္ဘောသား တစ်ယောက် သည်လည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ် သော လုပ်အားပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်....။ သံချေးခေါက် ဆေးသုတ် သန့်ရှင်းရေး ဆိုသော အရာများသည် အများအခေါ် ကုန်းပတ်တိုက်သည် ပင် ဆိုပါစေ.... မိမိအိမ်တွင် မိမိအခန်း
မိမိပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရောဂါကင်းစေရေး အတွက် လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ မိမိတို့ သင်္ဘောကြီး၏ ကျန်းမာကြံ့ခိုင­်ရေးအတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင် ရမည်သာ..... ရှက်ရွံ့စရာမဟုတ်ပါ...။ မိမိ အိမ်ခြံဝန်း အတွင်း သန့်ရှင်းရေးမလုပ်သည်သာ ရှက်စရာ အမှန်ဖြစ်သည်..။
သင်္ဘောတစ်စီးလုံးတွင် ရှိသော အတတ်ပညာမျိုးစုံ­ကိုယ်စီပိုင်ရှင်များသည် သူ့နေရာနှင့်သူ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သူချည်းသာဖြစ်ပါသည်... လူပိုတစ်ယောက် အသုံးမ၀င်သူကို မည်သည့်သင်္ဘောပိုင်ရှင်က လုပ်ခလစာပေးထားမည်နည်း...။
သင်္ဘောမောင်းနှင်ခြင်းသည်ရွေ့လျားနေသော စက်ရုံကြီးတစ်ရုံကိုမောင်းနှင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်..။ သင်္ဘောမောင်းနှင်ခြင်းအတတ်ပညာကိုကားစတီယာရင် လှည့်သကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြင့် မောင်းနှင်သည်ဟု­ထင်မြင်နေကြသော
လူပေါင်း မြောက်များစွာ တွေ့ဖူးပါသည်..။ဘယ်လို ရှင်းပြရမှန်း ကို မသိတော့ပါ.....။အမှန်တွင်... သင်္ဘော တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ ၊ တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံ ရွေ့လျားရောက်ရှိရန် အတွက် တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်း လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ....
သင်္ဘောပေါ်တွင် ရှိသော Crew List အတွင်းပါ ၀င်သော No. 1 မှ No. အောက်ဆုံး ထိ သင်္ဘောသား အရာရှိ ကြီးငယ် အစုံ တို့ စုပေါင်း လုပ်ဆောင် (Team Work) မှသာ ပြီးမြောက်ပြည့်စုံ ပါလိမ့်မည်...။ သုံးစားမရသော ၊ အသုံးမ၀င်သော သင်္ဘောသား မရှိပါ...
သင်္ဘောပေါ်စတက်၍ သံပြားနင်းချိန်မှ စပြီး အိမ်ပြန်ရန် သင်္ဘောမှပြန်ဆင်းချိန်အထိ ကျရာတာဝန်ကို မလုပ်မနေရ ကျေပွန်ရန်လုပ်ရသူချည်းသာ ဖြစ်သည်....။ ကုန်းပေါ်တွင် နေလျှင် လုပ်စရာ အလုပ် မရှိ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ဟု ပြောနေကြသူ အများအပြားလည်း တွေ့ဖူးပါသည်..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ... ။ အကြမ်းအားဖြင့် မှန်ပါလိမ့်မည်...။ ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောပေါ်တွင် ရိုးရိုးသင်္ဘောသား ၏ လစာ မှာ USD 1300 + + ကျော် ရပါသည်... ။ သူ့လစာ အတိုင်း မိခင်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ရရှိမည်ဆိုပါက ထိုသို့ပေးသော မည်သည့် လုပ်ငန်းတွင်မဆို လုပ်နိုင်ပါသည်.­.. သင်္ဘောပေါ်တွင် လုပ်ရသော
အလုပ်ချိန် အတိုင်း Over Time ကြေး... အလုပ်နားရက် များသာ တိကျပါစေ.. မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်­နေသော ၀န်ထမ်းများ ထက် မတော်လျှင်သာ ရှိမည် လုံးဝ မညံ့သောသူများသာဖြစ်ကြောင်း... သိစေလိုပါသည်...။
ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သတ်၍ သင်္ဘောသားတိုင်းသည် ၆ လအတွင်း ဆေးစစ်ထားသော လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားပြီး နှင့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် လုံးဝ ကို FIT ဖြစ်နေသောသူမျိုးများပင်... ယနေ့ခေတ် သင်္ဘောသားများ၏ ပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့်ကျန်းမာရေး အသိပညာ
များသည် များစွာတိုးတက်လာခဲ့ပါပြီ..။ ကမ်းမကုန်သေးပါ.... တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ခတ် နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်...။ ဟိုက်ဒရောလစ် စံနစ်၊ ဘွိုင်လာစံနစ် ၊ Pump System ၊ Central Air Condition System , Management , fire fighter , Nurse , First Aid ပညာ ၊ ဆေးသုတ်ခြင်း အတတ် ၊ ပြုပြင်ခြင်း အတတ်ပညာများစွာ... ထိုကဲ့သို့သော မြောက်များစွာသော အတတ်ပညာ များကို တတ်မြောက်ထားသောအစုအဖွဲ့ တစ်မျိုးကိုသင်္ဘောသား ဖြစ်သည်ဟုမြင်မိပါသည်... စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ဌာနပေါင်းစုံမှ လုပ်သားများရှိသကဲ့သို့
သင်္ဘောတစ်စီးတွင်လည်း အတတ်ပညာမျိုးစုံ­တတ်မြောက်သော လုပ်သားများ ရှိရန်လို အပ်ပါသည်...။ သူတော်သည် ငါတော်သည် သူကအောက် ငါကအပေါ် လုပ်နေခြင်းထက် စုစုစည်းစည်းနှင့် ဒီဘက်ကမ်းမှ ဟိုဘက်ကမ်း သို့ အန္တရာယ်ကင်းဝေးပြီး တိကျသေချာစွာရောက်ရှိစေရန်အတွက်အသိပညာ အတတ်ပညာနှင့်မောင်းနှင်နေသူတို့သည် သာ သင်္ဘောသား များဖြစ်ကြပါကြောင်း.....။
P.S : မိမိ၏အမြင်သာဖြစ်သောကြောင့်လွတ်­လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
(credit to Aung Htun Kyaw - MSG FB Page)